“Jiraachuu keessan dhukaasaa nu garsiisaa jenne malee dhiichisaa nu garsiisaa yoom jenne?” -
“Jiraachuu keessan dhukaasaa nu garsiisaa jenne malee dhiichisaa nu garsiisaa yoom jenne?”
bilisummaa January 19, 2017	1 Comment
Je’e hiriyaan kiyya tokko. Siitu je’e akka naan hin jenne! Yoon je’e hoo maaltu gaa ja’a? Dhugumattuu nama injifannoo argate malee namni bishaan jige osoo ol hin qabin akkamitti dhiichisa? Osoo mixii hin ajjeesin akkamitti cal’isee geeyrara? Osoo abbaafi haati teenya dhiitamanii, eessaatu nurraa dhiichisa? Gaafii deebii dhabde.
Previous UK tenders to train Ethiopian paramilitaries accused of abuses
Kun gaafii oromoo hundaa ti! Dur oromoon ajjeesee galu malee hingeraru. Geerare lee irraa hinbareedu. Inii hammaa baqatee biyya namaati galeetu otoo maatiiin isaa lafa irraa duguugamtu yoo dadhabellee boyicha dhiisee ” kunoo ani jira” jedhe lafa dhiita. Yaa Waaqayyo Jaal Galaassaa nuu gargaarii salphina kana keessaa oromoo baasi!